Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कोरोनाभाइरसबाट निको भएकी युवतीः “मेरो रगतले रहस्य पत्ता लगाउनेछ” - Pnpkhabar.com
एजेन्सी, २१ चैत : कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको थाहा पाउँदा त्रासले श्वास नै अबरुद्ध भएको अनुभव टिफानी पिन्क्नीको दिमागमा अझै ताजै छ । न्यूयोर्क शहरकी यी ३९ वर्षीया आमा निको मात्र भइनन्, उनले अरु बिरामी बचाउने सन्दर्भमा अर्को नयाँ इतिहास पनि रचिन् । उनले अन्य गम्भीर बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो रगत दान गरेकी छिन् ।
पिन्क्नीले एसोसिएटेड प्रेसलाई भनिन्, “मेरो रगतमा सायद कोरोनाको उपचारसँग जोडिएका प्रश्नहरुको उत्तर हुन सक्दछ । यो कुरा थाहा पाउँदा मलाई अति खुशी लागेको छ ।”
न्यूयोर्कको माउन्ट सिनाई अस्पतालका अध्यक्ष डा. डेभिड राइखले भने, “अहिले यो विधिका बारेमा चौतर्फी चासो छ, र मानिसहरु यो विधि अपनाउन भनिरहेका छन् ।” यही अस्पतालमा टिफानीको उपचार गरिएको र निको पनि भएका थिए ।
“जब नयाँ रोगहरू देखा पर्दछन् र वैज्ञानिकहरू खोपहरू वा औषधिहरूको लागि दौडिरहेका हुन्छन् त्यसबखत यो “एक द्रुतगतिको पहिलो उपाय हो जुन हामी चाँडै राख्न सक्छौं,” सेन्ट लुइसस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसिनका डा. जेफ्री हेन्डरसनले बताए । यस विश्वविद्यालयले प्लाज्माको सम्भावनाका बारेमा देशव्यापी अध्ययनको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
तर अहिलेका लागि, “तिनीहरू सडकमा सबैभन्दा सुरक्षित व्यक्तिहरू हुन्” सियाटलमा ब्लडवर्क नर्थवेस्टका डा. रेबेका हेलीले बताए । यो संस्थाले रक्तदाताको पहिचान गर्दछ । “हामी उनीहरूबाट एन्टिबडी प्राप्त गर्न दबाब भने दिँदैनौं ।”
“तपाईं त्यस्तो व्यक्तिबाट प्लाज्मा लिन सक्नुहुन्न जसको औसत रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता छ । त्यो सहयोगी हुने छैन,” राष्ट्रिय स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट (एनआइएच)की डा. जुली लेजरवुडले बताइन् ।
तर टिफानी जस्ता व्यक्तिहरूले गर्ने रक्तदानलाई रक्त केन्द्रहरूले कति चाँडो प्रशोधन गर्न सक्छन् भन्नेमा पनि निर्भर हुनेछ । मार्चको पहिलो हप्ता उनी बिरामी परेकी थिईन् । उनलाई शुरुमा ज्वरो आएको थियो । उनलाई श्वास फेर्न कठिन हुनुका साथै लामो श्वास लिँदा छातीको दुःखाई अनुभव भएको थियो । एकल आमा टिफानीलाई आफ्ना ९ र १६ वर्षका छोराहरुको चिन्ता थियो ।
“मलाई मेरो बाथरूमको भुइँमा रोइरहेको र प्रार्थना गरेको याद छ,” ३९ वर्षीया टिफानीले सुनाईन् । त्यसपछि उनी परीक्षण र उपचारका लागि माउन्ट सिनाई अस्पताल गइन् । उनी अस्पतालमा ठीक भइन्, र अस्पतालले रक्तदान गर्नुहुन्छ भनी उनलाई सोध्यो । उनले अस्पतालको अनुरोधलाई तत्कालै स्वीकारिन् । “यो अरू कसैका लागि आशाको एक प्रकाश हो,” उहाँ आफ्नो रगतले अरुको जीवन बाँचेको खबर सुन्न व्यग्रताका साथ पर्खिरेकी छिन् ।
शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट इन्डोनेशियामा